Tsy miseho mivantana ny fakam-panahy
"Fantatro fa rehefa lasa aho dia hisy amboadia masiaka hiditra eo aminareo izay tsy hiantra ny ondry. Ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy» - Asa. 20:29,30.
Tsy nandao ny olony Andriamanitra ary tsy nifidy olona matanjaka iray etsy ary olona iray hafa eroa ho olona hany mendrika hametrahana ny fahamarinana. Tsy manome fahazavana vaovao ho an'ny olona lzy izay mifanohitra amin'ny finoana avy amin'ny vatana. Amin'ny fanavaozana tsirairay dia hipoitra ny olona hilaza izany hafatra izany. (...)
Ekena ny hevitra vaovao sy tsy mbola hita iray izay toa tsy mandà ny fahamarinana. Mandeha tsimoramora izany mandra-pahatonga ny fotoana izay toa hitafiany fahatsara sy mampisy lanja azy satria i Satana dia manana hery hisehoana amin'izany endrika diso izany. Farany, dia ho tonga foto-kevitra mandray ny zava-drehetra izany, ilay hany teboka lehibe indrindra hodidinin'ny rehetra; dia fongarina ao amin'ny fo ny fototry ny fahamarinana. (...)
Mampitandrina anareo amin'ireo olona izay manana fironana hampihodina ny saina hiala amin'ny fahamarinana aho. Loza mandrakariva ny fahadisoana. Mandrakariva dia tsy manamasina izany fa mitondra henatra sy fisaratsarahana (...)
Fakam-panahy an'arivony miseho amin'ny endrika hafa no voaomana ho an'ireo izay manana ny fahazavan'ny fahamarinana; ary ny hany fiarovana ho an'ny tsirairay amintsika dia ny tsy fandraisana foto-pinoana vaovao, fanazavana vaovao momba ny Soratra Masina raha tsy efa nanontaniana ireo mpiray tampo amin'ny finoana miara-mandalina. Arosoy eo anoloan'izy ireo amin'ny saina manetry tena sy mampianatra izany miaraka amin'ny vavaka tsy misy fihatsarambelatsihy; ary raha tsy mahita fahazavana amin'izany izy ireo dia ekeo ny fitsarany (...)
Am-perinasa mandrakariva Satana; saingy vitsy no mahalala ny zavatra ataony sy ny fitandremany. Mila mivonona mba hahatohitra ilay fahavalo mpamitaka ny vahoakan'Andriamanitra. Izany fanoherana izany no atahoran'i Satana. lzy no mahafantatra bebe kokoa noho isika ny fetran'ny fahefany sy ny fomba tsotra haharesena azy raha manohitra ka miatrika azy isika. Noho ny hery avy any ambony, ny saina osa indrindra dia mahery indrindra ho azy sy ireo anjeliny rehetra, ary raha ampandalovina amin'ny fitsapana izy dia afaka ny hanaporofo ny heriny ambony indrindra. Vokatr'izany dia tsy re tsaika ny famindran'i Satana sy ny hetsika ataony ary ireo batery misaron-tava. Tsy sahy miseho an-karihary izy, tahotra ny hampifoha ny hery matory ananan'ny Kristianina ka handefa izany any amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. — TFC, 5:291-294